Unyaka weNtlokoma waseTeresian. Imibongo emi-5 kaTeresa de Jesús ngomhla wakhe wokuzalwa | Uncwadi lwangoku
Siphakathi kweyokuqala Isikhumbuzo seTeresian, eyaqala nge-15 ka-Okthobha kunyaka ophelileyo (umthendeleko we UTeresa oyiNgcwele kaYesu), kwaye iya kuhlala kude kube ngu-Okthobha u-15, 2018. Kwaye u-Enrique IV, utyelelo ku Avila ubunzima zihlala zilungile. Kodwa ukuba sifuna lo nyaka Ukuzihlaziya kukaThixo Ngcwele, kusekho izizathu ezingakumbi zokuwela iindonga kwaye utye isteki njengesono sokugqibela sokutya okubaxolela. Yintoni engenakuxolelwa kukungayifundi iTeresa de Cepeda y Ahumada, ngubani wazalwa ngomhla onje namhlanje 1515.
Kodwa kobu bomi yonke into ineyeza ngaphandle koMvuni oMdaka, njengoko sonke sisazi. Ke ukusukela apha, nakwinkumbulo yakhe, ndizikhetha ezi 5 imibongo ukuba lo Gqirha weCawa usishiyile, ubuninzi besalathiso semibongo eyimfihlakalo.
1 Inqaku elifutshane kuTeresa kaYesu
2.1 I-colloquium enothando
2.2 Akukho nto ikuphazamisayo
2.3 Ndihlala ngaphandle kokuhlala kwam
2.4 Ukusa kuyeza
2.5 Isikelelekile intliziyo ngothando
Inqaku elifutshane kuTeresa kaYesu
Ubomi buka-Saint Teresa kunye nokuziphendukela kwemvelo ngokomoya kunokulandelwa kwimisebenzi yakhe yobomi enje Ubomi, Ubuhlobo bokomoya okanye Incwadi yeziseko (eyaqala ngo-1573 yaza yapapashwa ngo-1610). Kukho phantse iileta ezimakhulu mahlanu. Yasekwa Umyalelo weKarmele kwaye wayengumhlaziyi wayo omkhulu kunye neSan Juan de la Cruz. Kwakhona wabhala Indlela yokugqibelela, Iindawo zokuhlala o Inqaba yangaphakathi.
Wayehlala eqamba imibongo ngamanye amaxesha, iphefumlelwe yimibongo nezicengcelezo zabefundisi ukuba wafunda ebutsheni bakhe. Emva koko naye wayeyithanda Iincwadi ze-chivalric. Ndikhetha ezi zi-5 ezizezintanda zam ngokuqinisekileyo.
Ukuba uthando ondithandayo,
Thixo wam, ifana nale ndinayo,
Thelela: ndiyeke phi?
Okanye wena, umisa ngantoni?
-Alma, ufuna ntoni kum?
-Thixo wam, ungaphaya kokukubona.
-Uze woyike ntoni ngawe?
-Into endiyoyika kakhulu kukukhulula.
Umphefumlo ofihlakeleyo kuThixo
Yintoni onqwenela ukuyinqwenela,
kodwa ukuthanda ngakumbi ukuthanda,
kwaye ngothando konke okufihliweyo
Ndicela uthando oluhlala kulo,
Thixo wam, umphefumlo wam unawe,
ukwenza indlwane emnandi
apho ilungele khona.
Akukho nto ikuphazamisayo
Ungavumeli nantoni na ikuphazamise;
akukho nto ikoyikisayo;
yonke into iyadlula;
ifikelela kuyo yonke into.
akukho nto ilahlekileyo.
NguThixo yedwa owaneleyo.
Ndihlala ngaphandle kokuhlala kwam
kwaye ke ubomi obuphezulu ndiyathemba
ukuba ndife ngenxa yokuba andifi.
Sele ndihlala ngaphandle kwam,
emva kokufa kothando,
kuba ndihleli eNkosini,
ukuba wayefuna mna ngokwakhe;
xa intliziyo yam yamnika wabeka lo mqondiso kum:
"Oko ndiyafa kuba andifi."
Lo manyano kaThixo,
nothando endiphila ngalo,
undenza umthinjwa wam;
uyikhulule intliziyo yam;
kwaye ibangela inkanuko enjalo kum
ubone uThixo wam ubanjwa,
Owu, bude kangakanani obu bomi!
Hayi indlela abahlukumeza ngayo aba bathinjwa
le ntolongo kunye neentsimbi
yintoni umphefumlo obandakanyekayo!
indibangela iintlungu eziqatha,
Uye wandishiya nje
kuba ukufa kushiyekile,
kodwa kukuziphilela nokuzonwabisa?
ukufa, endikufunayo kuwe;
Gallejo yam, jonga ukuba ngubani obizayo.
-Iingelosi zikho, ukuba ukusa kuyeza.
Indinike ibuzz enkulu
kubonakala ngathi cantillana.
Jonga iiBras, sele kukhanya,
Ngaba uhlobene nosodolophu,
okanye ngubani le ntombi?
Uyintombi kaThixo uYise,
Isikelelekile intliziyo ngothando
ukuba nguThixo yedwa oye wacinga;
ngenxa yakhe ulahla yonke into edaliweyo,
kwaye kuye ufumana uzuko lwakhe nokwoneliseka.
Kwakhe uhlala engakhathalelwanga,
ngenxa yokuba zonke iinjongo zakhe zikuThixo wakhe,
kwaye ndonwabile kwaye ndonwabile kakhulu
amaza olwandle olulwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Unyaka weNtlokoma waseTeresian. Imibongo emi-5 kaTeresa de Jesús ngomhla wokuzalwa kwakhe
"Inqaba emnyama." I-horror, inzululwazi kunye nefantasy emnyama entshona nguStephen King.